Nei Kutengesa uye Kushambadzira Matimu Anoda Cloud ERP | Martech Zone
Kushambadzira uye vatungamiriri vekutengesa zvinhu zvakakosha mukutyaira kambani mari. Dhipatimendi rekushambadzira rinoita basa rakakosha mukusimudzira bhizinesi, kudoma zvarinopa, uye nekumisikidza vanosiyanisa. Kushambadzira zvakare kunogadzira kufarira chigadzirwa uye kunogadzira zvinotungamira kana tarisiro. Mune konzati, zvikwata zvekutengesa zvinotarisa pakushandura tarisiro yekubhadhara vatengi. Mabasa acho akanyatsobatana uye akakosha pakubudirira kwe bhizinesi.
Tichifunga nezvekukanganisa kwekutengesa uye kushambadzira kune zvakanakira pasi, zvakakosha kuti vanoita zvisarudzo vawedzere nguva uye tarenda ravanaro, uye kuti vadaro vanofanirwa kuve neruzivo rwekuti zvikwata zviri kuita sei pane rese chigadzirwa. Kufambira mberi kwetekinoroji kwakaita kuti zvive nyore kuwana chaiyo-nguva kuwana ruzivo nezve vashandi vebhizinesi nevatengi. Kunyanya zvakanyanya, gore-based ERP tekinoroji inopa izvi zvakanaka.
Chii chinonzi Cloud ERP?
Cloud ERP iSoftware seSevhisi (SaaS) iyo inobvumidza vashandisi kuwana Enterprise Resource Planning (ERP) software pamusoro peinternet. Cloud ERP kazhinji ine yakaderera zvakanyanya kumberi kwemitengo nekuti komputa zviwanikwa zvinodzidziswa nemwedzi pane kutengwa chaiko uye kuchengetedzwa pane-nzvimbo. Cloud ERP zvakare inopa makambani kuwana kwavo bhizinesi-kwakakomba kunyorera chero nguva kubva chero nzvimbo pane chero chishandiso.
Gore ERP Riri Kuchinja Sei?
Kufarira uye kugamuchirwa kwegore uye nhare mbozha manejimendi mhinduro kwave kuri kukura mumakore achangopfuura. Kuwedzera kufambira mberi muhunyanzvi kwakasimudza chinodikanwa chemidziyo yakabatana uye data-rechokwadi-nguva kubatsira kuzivisa sarudzo dzakakosha dzebhizinesi Iko kushandiswa kwemidziyo yakangwara senge mafoni, mapiritsi, uye zvimwe zvinhu zvemadhijitari zvachinja nzvimbo yebasa.
Sezvo COVID-19 denda, kudiwa kwegore uye nharembozha mhinduro ine exploded. Iko kudiwa kwekuitisa bhizinesi kubva chero kupi uye chero nguva kwakawedzera kudiwa kwekubatanidzwa kwegore. Uku kuda kwakatungamira mukumisikidzwa nekukurumidza kwema mobile manejimendi manejimendi manejimendi ayo anoshongedza vashandi nekwanisi yekushanda kubva kunze kwehofisi uye kugara vakagadziriswa pane yemakambani data mune chaiyo-nguva. Gartner anofungidzira izvo zvepasirese veruzhinji gore rezvemari richakura ne6.3 muzana muna 2020. Kupfuurirazve, software sevhisi (SaaS) inoramba iri chikamu chikuru chemusika uye inofungidzirwa kukura kusvika pamadhora 104.7 bhiriyoni mu2020.
Acumatica yakaziva kudiwa kwegore uye mhinduro dzemafoni kubvira payakavambwa muna2008, uye inogara ichivandudza mhinduro dzayo kuti ishandire zvirinani zvido zvinoshanduka zvemabhizimusi ekukura kwepakati. Just ino yapfuura Gunyana, semuenzaniso, Acumatica yakazivisa kuburitswa kwe Acumatica 2020 R2, yechipiri yezvigadzirwa zvayo zviviri zvinogadzirwa.
Iyo nyowani yechigadzirwa kuburitswa inosanganisira yeinokosha nhamba yekuvandudzwa, kusanganisira:
Kubatanidzwa nekutungamira eCommerce kunyorera Shopify
Automated AI / ML-inogoneswa maAccounts Anobhadharwa gwaro rekugadzira, izvo zvinorerutsa mashandisiro evashandisi dhata iyo inogona kuoneswa pamadhibhodhi, kuongororwa mumatafura epivot, uye anoshandiswa kuzivisa -nguva-chaiyo.
Wakazara chizvarwa POS software mhinduro iyo inopa vatengesi neicho chaicho-nguva kuverengerwa kuwanikwa, nzvimbo dzakawanda, uye kumashure-kumagumo imba yekuchengetera ine barcode scanning. Iye zvino, vashandisi vanogona kubata yakakwana omni-chiteshi ruzivo vasina vashandi vepasite.
AI / ML-inogoneswa yepamusoro yemari manejimendi, iyo inosanganisira zvemagetsi emabhengi feeds emakambani emakambani uye inogadzira risiti yekugadzira kudzikamisa maitiro evashandisi vese vanoshandisa nhare pamwe nevekumashure-muhofisi vanoongorora vashandi.
Mari yekushandisa inonyanya kukosha izvozvi mumadhipatimendi emari emubatanidzwa. Iyo COVID-19 denda yakatungamira makambani kuisa kusimbiswa kutsva pamusoro pemari yekushandisa, nechinangwa chekutsvaga nzvimbo dzekuchengetedza mutengo. Zviitiko zvisati zvamboitika zvegore rino zvasimbisa kudiwa kwemabhizinesi ekudyara mari pakuonekwa zvirinani, zvirinani kudzora mitengo, uye otomatiki. Vatungamiriri vebhizinesi vanoda zviwanikwa, ikozvino kupfuura nakare kose, kuti vawane ruzivo rwakawanda rwebhizinesi. Acumatica nyowani yekudzidzira muchina kugona inowana kuve nehungwaru nekufamba kwenguva, kudzidza kubva pamanyorerwo ekugadziriswa kwedhipatimendi rekunze pakupedzisira kugadzirisa nzira dzakajairika dzemari uye kuchengetedza mabhizinesi mari.
Sei Cloud ERP Kutsigira Kutengesa Uye Kushambadzira?
Cloud ERP inogona kupa zvikwata zvekutengesa nemaonero akazara emikana, vanobatika, uye zviitiko zvese zvinokanganisa sarudzo yekutengesa. Uye zvakare, kutungamira kupihwa uye kufambiswa kwemabasa kunogona kubatsira kubata maitiro ekutengesa kunatsiridza kugona. Zvishandiso zveE ERP zvinowedzera kuyerera kweruzivo, zvinoderedza kutenderera, uye kuwedzera padyo mitengo.
Yezvikwata zvekushambadzira, gore ERP rinogona kutsigira yakagadziriswa kushambadzira mhinduro, yakasimba yakabatana nemari uye zvemukati manejimendi. Kuve neyakabatanidzwa yekushambadzira mhinduro inogona kuvandudza kubatana pakati pekutengesa, kushambadzira, uye rutsigiro uku uchionawo yakakwira ROI yedhijitari yega yega yekutengesa yakashandiswa. Yakasangana neiyo ERP system, zvikwata zvekushambadzira zvinogona zvakare kuwedzera masisitimu eCustomer Relationship Management (CRM) ekugadzirisa manejimendi, kugadzirisa shanduko, kuyera mashandiro emushandirapamwe, kutaurirana nevanosangana navo, uye kugadzirisa kugadzirwa. Ivo vanogona zvakare kutora anotungamira kubva kune ewebhu mafomu, zvakatengwa zvinyorwa, kushambadza, yakananga tsamba, zviitiko, uye zvimwe zvinyorwa.
Nekuda kwekuvakwa kwavo kwewebhu-kwakavakirwa, mazhinji gore ERP zvinopihwa zvinouya nemaAPIs ekukurumidza kusangana kune mamwe mamishinari-akakosha software maturusi uye zvirongwa. Iwo mabhenefiti ekutengesa uye ekushambadzira zvikwata akawanda, kusanganisira nekukurumidza uye kwakachipa kuitisa uye nekukurumidza kukurumidza-kune-kushambadzira kwema mobile nzira. Nekushandisa iyo gore ERP mhinduro, yekutengesa uye yekushambadzira zvikwata zvinogona kuwana hukuru kutonga pamusoro pemabatiro avo uye nekunzwisisa kuri nani mukuita kwavo mune chaiyo-nguva. Ivo vanogona kuchengetedza kugadzirwa kwakakwira nekupa vashandi online kuwana kune-up-to-date ruzivo kubva chero kupi vachishandisa chero chishandiso chero nguva.
Tags: acumaticaAPImari yekuchengetedzaERPkushandisa mariMarketingkushambadzira ERPpos softwarerokutengesashopify